လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖားများအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖားများအကြောင်း
Posted by manawphyulay on Jan 16, 2013 in Business & Economics | 20 comments
ဖားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ သူဌေးက ပေးထား၊ ကျွေးထားသူ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မျက်စိဒေါင့်ထောက်ကြည့်ပြီး သူဌေးကို အတို့အထောင်ပြန်လုပ် သူဌေးယုံကြည်အောင် ပြောဆိုနေသူများကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူဌေးက မမေးရသေးဘဲနဲ့ တစ်လုံးမကျန် အိပ်သွန်ဖာမှောက် အူမချေးခါးမကျန် ပြန်လည်တင်ပြကြသည် များကို ဆိုလိုပါသည်။ ကောင်းသတင်းကို ပြန်မပြောပဲ မကောင်းသတင်းကို ပြန်လည်ဖြန့်သည်များကို ဖားလို့ သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သတ်ဖားရဲ့ရာဇ၀င်ကတော့ သူဌေးက မွေးထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်း ကောင်းကောင်း နားလည်တဲ့သူပေါ့။ မိမိသူဌေးအပေါ် သစ္စာမရှိတဲ့ဖားကို သတ်ဖားလို့ ခေါ်တာပါ။ သူဌေးကတော့ သူမွေးထားတဲ့ ဖားကို ယုံကြည်ပြီးသား ပြောသမျှ ယုံနေတဲ့သူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သတ်ဖား ဆိုတာမျိုးက ဘနဖူး သိုက်တူးမယ့် လူသားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ သူဌေးက သတ်ဖား ပြောသမျှ နားယောင်ပြီး ဟိုဟာလုပ် ဒီဟာလုပ် မြှောက်ထိုးပင့်ကော် အလုပ်တတ်ဆုံးကတော့ သတ်ဖားပါပဲ။ အများအားဖြင့် သူဌေးလူယုံလို့ ကိုယ်ဘာသာ နာမည်တပ်ထားကြပြီး သူဌေးရဲ့ ကားကို မောင်းပေးရတဲ့သူတွေက ဘယ်သူကတော့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေတယ်။ ဘယ်လိုအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ရမ်းသမ်းပြောပြီး သူဌေးရဲ့အိမ်ခွေးအဆင့်လောက်ပဲ ရှိပြီး တစ်ဖက်သားအပေါ် မကောင်းမြင်ဝါဒတွေ စွဲကိုင်ထားသူဖြစ်တဲ့အပြင် မကြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ ကိန်းအောင်းနေလေ့ ရှိကြပါတယ်။
ဖားပျံရဲ့သဘောက ဖားတတ်တဲ့သူကို သူဌေးက အမြဲ လိုတာတွေထောက်ပံ့နေရင် အရမ်းသဘောမနောခွေ့နေ တတ်ပြီး အဆင်မသင့်လို့ သူဌေးက သူ့ကို နည်းနည်းလေးများ ဆူမယ် ဟောက်မယ် မလုပ်လိုက်နဲ့ သူဌေးပေးတာထက် ပိုပေးတတ်တဲ့သူဆီကို အချိန်မရွေး ကူးပြောင်းသွားတတ်တဲ့သူမျိုးကျတော့လည်း ဖားပျံ အမျိုးအစားမှာပါတယ်လေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ဒီမှာ သူဌေးကို ဖားလို့မရတော့မှန်းသိတော့ ဖားလို့ရမယ့် နေရာ ဘယ်နေရာကို သွားရမလဲဆိုတာ ကြိုတင်စိတ်ကူး အကောင်အထည်ဖော်တတ်ခြင်းကို ဖားပျံ အမျိုးအစားလို့ ခေါ်လို့ရတာပေါ့။
ရာဘာဖားရဲ့ ဆိုလိုချက်ကတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ်က နေရာရအောင် လုပ်နေတယ်။ သူဌေးရဲ့ ရှေ့မှာ ကိုယ်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်။ သူများက အလုပ်မလုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ဂိုက်ပေးကြမ်းတတ်ကြတယ်။ ဖားတဲ့နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိဘူး။ အလုပ်ခွင်အတွင်းမှာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ မနေတတ်ပဲ တစ်ဦး တစ်ယောက်ထဲ တသီးတခြား နေထိုင်တတ်ပြီး အလိုလိုသူများကို အပြစ်ကျအောင် လုပ်ဆောင်တတ်သူတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေက သူ့ကို ပစားမပေးတော့ဘူး။ နေရာမပေးတော့ဘူးဆိုရင် အလုပ်မှာ မပျော်မွေ့တော့ဘဲ တခြားနေရာသွားဖို့ စိတ်ကူးကြတော့တာပါပဲ။ ဒီလိုနေရာ ပြောင်းသွားတာတောင် တခြားနေရာ ရောက်သွားရင် ဒီသူဌေးရဲ့ကောင်းကြောင်း ပြောဖို့ထက် မကောင်းကြောင်းပြောဖို့ တာစူနေ တတ်ကြပါတယ်။ ရာဘာတွေလို ပြန်ကန်တတ်တဲ့သဘောကို တွေ့ရှိရတာကြောင့် ရာဘာဖားလို့ သတ်မှတ်လို့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် လာတဲ့ဝန်းကျင်ကြောင့်လား၊ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တာလား ဆိုတဲ့အတွေးတွေ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ အနည်းနဲ့ အများကတော့ ရာထူးကြီးသူတွေမှာလည်း တွေ့ရှိရတဲ့ အချက်ကတော့ အထက်ဖား အောက်ဖိတွေ များပြားနေတာကြောင့် အလုပ်ခွင်တွေ အတွင်းမှာ စည်းလုံး ညီညွတ်မှုတွေ ပြိုကွဲကြပြီး အလုပ်လုပ်ရင်း မပျော်မွေ့ကြတာတွေ များနေတာကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေ ဘာကြောင့် ရှိနေသလဲ။ စိတ်ဓာတ်တွေကို မပြုပြင်သရွေ့တော့ လူအများနဲ့ အစေးကပ်မှာ မဟုတ်ပဲ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုတွေလည်း နှောင့်နှေးနေကြမယ်လို့ ကျွန်မ မြင်မိတဲ့အတွက် ခေတ်ပြောင်း စနစ်ပြောင်း၊ နှစ်အပြောင်းမှာ စိတ်ဓာတ်လေးတွေလည်း ပြောင်းလဲသင့်ပြီလို့ ယူဆမိတဲ့အတွက် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုနေရာမှာ ဘယ်လောက်တောင် ဖား Skill တွေ များနေသလဲဆိုတာ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိပါတော့ တယ်ရှင်။
အပေါ်က အုပ်ချုပ်သူ အမြင်နှင့် ပြောမယ်နော် ။
သူဋ္ဌေး / အုပ်ချုပ်သူ ဆိုတာတွေဟာ ၊
သိပ် ဒူ / သိပ် တုံး လို့ သူဋ္ဌေး / အုပ်ချုပ်သူ ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါ ။
တုံးချင် ယောင်ဆောင်တာ ၊ မသိချင် ယောင်ဆောင်တာ ၊
ဒေါသထွက်ချင် ယောင်ဆောင်တာ ၊ အကုန် လုပ်တတ်ပါတယ် ။
ဖါးတဲ့သူ တွေကတော့ အများကြီး လာမှာပါပဲ ၊
အဲဒီ လာဖါးတဲ့သူတွေကို ကိုယ်က နှစ်စု သုံးစုခွဲ ပြစ်လိုက်ပြီး ၊
အဲဒီမှာ နှစ်စု သုံးစု က ပြော / ဖား / တွန်း တဲ့ စကား ၊
နှစ်မျိုး သုံးမျိုး ထွက်လာလိမ့်မယ် ။
အဲဒီထဲကမှ ကိုယ်က အမှန်ကို ရွေးထုတ်ယူပါတယ် ။
သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ၊
ဖားတဲ့သူဟာ ကလန်ကဆန် လုပ်တဲ့သူထက် အများကြီးသာပါတယ် ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖားတဲ့သူဟာ အနဲဆုံး ၊
သူဋ္ဌေး / အုပ်ချုပ်သူ ဆီက မျက်နှာကောင်းလေး လိုချင်စိတ် ရှိနေသေးလို့ပါ ။
သူ့ကို ဆွဲခေါ် / မြှောက်ပင့်ပေးတတ်ရင် ၊
အများကြီး အသုံးဝင်သေးတာကို တွေ့ရပါတယ် ။
ဖားတဲ့သူ မတွေ့ချင်ရင်များ လွယ် လွယ်လေး ။
ငွေ ၊ အာဏာ ၊ မျက်နှာသာ သာ ပိုမပေး နှင့် ၊
သူ့ဟာသူ ဖားတာပျောက်သွား လိမ့်မယ် ။
အဓိက က လူမှန် နေရာမှန် အလုပ်ခိုင်းတတ်ဖို့ပါပဲ ။
ဖားတဲ့သူကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နှင့် သွားလာရတဲ့ အလုပ်ခိုင်းပြီး ၊
ခပ်တည်တည် လုပ်ချင်တဲ့သူကို ဖင်မြဲရမယ့် အလုပ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ ။
ညှစ်တတ်ရင် ကျောက်ခဲ ကနေတောင် ဆီထွက်အောင် ညှစ်ယူလို့ရပါတယ် ။
နည်းပညာလေး နဲနဲတော့ လိုတာပေါ့လေ ။
လိုရင်းက လုပ်ငန်း အောင်မြင်ဖို့ပါ ။
ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်ပုံချဖို့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ၊
ကျမအထင်ပြောရရင်တော့ အထက်ဖားအောက်ဖိဆိုတဲ့ပုံစံက ပျောက်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဖားတတ်သူရဲ့ ဖားခြင်းကို အထက်ကလက်ခံနေသမျှ အသိအမှတ်ပြုနေသမျှပေါ့။ ဖားတတ်သူတွေကပဲ အထက်ရဲ့အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး နေရာရတတ်တော့ လူတွေကလည်း အခြေအနေအချိန်အခါအရ ပြောင်းလဲကုန်ကြတာပေါ့ (ရောမရောက်တော့ ရောမလိုကျင့်ရဆိုသလိုပေါ့)။ နောက်ပြီး လူအများက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအလေ့အထတွေကို ဖားခြင်းနဲ့ မကွဲပြားပဲ ရောယှက်နေတာလည်း တစ်ကြောင်းပါမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်က အဲဒါမျိုးလက်မခံတော့ နောက်အဲဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာ သိသွားတော့ ဆင်ခြင်သွားတာပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြား လူမှုရေးပြဿနာလည်း မဖြစ်တော့တဲ့အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကောင်းမွန်လာမယ် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ အားကောင်းလာမယ်။ အလုပ်မှာပျော်ရွှင်လာမယ်။ လုပ်ငန်းတိုးတက်လာမယ်။ ဖားခြင်းထက် အဓိကကတော့ မိမိကိုပေးအပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ကျေပွန်ရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ ဒါပေမယ့်လည်း ခက်တာက မြန်မာပြည်မှာ အဆင့်ဆင့်တိုင်းကလူတွေအားလုံးနီးပါးက အလုပ်တာဝန်ကျေးခြင်းထက် ဖားတာကိုပဲ ပိုသဘောကျနှစ်ချိုက် ကြည်ဖြူနေကြတော့ ဖားတဲ့သူတွေကိုလည်း အပြစ်မဆိုသာပြန်ဘူး။ အရင်းစစ်လိုက်တော့ အရင်းကပဲဖြစ်တာပါပဲ။
ဖားတစ်ကာ ဖားထဲမှာ အဲဒိအထက်ဖားအောက်ဖိလုပ်တဲ့ဖားက စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းအကျဆုံး စရိုက်အပျက်ဆုံးပဲ..။ ရုံးဌာနတွေမှာ သူတို့ပဲ တွင်ကျယ်နေတုန်း
ဖားခြင်းကလည်း သုံးတက်ရင် အသုံးဝင်ပါတယ်ကွယ်……
ပီးတော့ တချို့ဘောစိများဆိုရင် ဖားတဲ့သူတွေ မရှိရှိ အောင်ကို ဖန်တီးတဲ့ အကျင့်လေးတော့ ရှိသဗျ…..
ဒါဟာလည်း တနည်းအားဖြင့် အုပ်ချုပ်မှူ ယန္တာရားရဲ့ တက်ကနစ် တမျိုးပါပဲ…….
တချို့ က ကိုယ့်လူကို အောက်ခြေကနေထည့် မသိချင်ယောင်ဆောင် အများမြင်မှာ လူရိုး လူအ လေးပေါ့….
စကားပြောတာ ပိရိတယ် မဖွတက်ဖူး တိတ်နေတယ်ပေါ့…..
ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ တနေ့ တနေ့ဘောစိထံ ရှိသမျှ အားလုံး ရီပို့ တက်တဲ့ လျှို့ ဝှက် ဖားလေးတွေလည်း ရှိတက်ကြောင်း……
မနေ့ကဖတ်ပြီး ကိုယ်လည်း ဘယ်ဖား အမျိုးအစားထဲ ပါသလဲ စဉ်းစားမိသေး။
အထက်က အုပ်ချုပ်သူက ဘယ်လူ ဘာအမျိုးအစားမှန်းသိပြီး ကိုင်တွယ် တတ်ရင်၊
ကိုယ်တိုင်က မှန်ကန်တာပဲ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တတ်ရင် တော့ ဘယ်ဖား မှ ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။
ဖားသက်ပြင်းဆိုတဲ့ တစ်ကောင်ရှိတယ် အေ့
ဘယ် ဖား တွေ ဘယ်လို အော် အော် …
အဓိကကတော့ ကိုယ်အနေမှန်ဖို့ လိုတယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ် …
အမေ့ကိုတော့ ဖား ရတယ် လိုချင်တာ ရအောင်မို့လို့
သူ့ဆန်စားတော့လည်း .. ရဲရတယ်ပေါ့လေ .. အစ်မမနောရေ
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖားတွေများပေါပါ့ … ။ ဖားဆို တာ အနေထိုင်မတတ်လျှင် လူမြင်ကတ်ခံရစရာပေါ့လေ .. ဒါပေမယ့်လည်း နေတတ်ထိုင်တတ်လျှင် ..လူချစ်လူခင်တောင် များပါသေးတယ် … ။
သူဌေးနဲ့ အလုပ်သမားတွေကြား … နှစ်ဖက်ဖားရင်း … နေတတ်ကြပါစေချင့် …
ဖား အကြောင်း ဖတ်မိတော့ မှ
သူငယ်ချင်း ထဲက ခင်ဘို့ ကောင်းတဲ့ ကြောက်ဖား ဆိုတဲ့ ကောင် ကို သတိရမိသေးရဲ့
ဖား ဆိုလို့ လာဖတ်ပါတယ် …. ထင်တာလည်း မဟုတ်ဝူး ….။ဟိ…
တခါက ဖတ်ဖူးတဲ့ စာစုလေးပါ။ ဘာတဲ့
မှောင်ခို ဈေးကွက် ဆိုတာ တရားဝင်ဈေးကွက်ရဲ့
လက်လှမ်းမမီတဲ့ နေရာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ အရာ
ဆိုလိုချင်တာက … မှောင်ခို ကိုရော ဖား ကိုပါ အားမပေးပေမယ့်
တောင်းဆိုမှုရှိလို့ လိုအပ်လို့ ပေါ်လာတာ လို့ ဆိုချင်ပါတယ်…။
မှောင်ခို ကေ့စ်ကို ကိုးကားပြီး ပြောရရင်ဗျာ …
ဖား ပေါ်လာတာ ဖား ကြိုက်သူရှိလို့ပေါ့ …
ဖားတာကြိုက်တယ် ..ဖားရင် နှစ်သက်တယ် ဆိုတဲ့ အထက်လူကြီးမျိုးကို
လက်ညှိုးထိုးချင်ပါတယ်။ ဖားလို့မရမယ့် .. (ရာနှုန်းပြည့် မရ လို့တော့ မဆိုလို
ဖားရခက်မယ့် ..) PDCA စနစ်တွေ ရှိရဲ့ဗျ ……။ အဲ ..ဖားတာကြိုက်တဲ့
ဘောဇိ တချို့ .. သုံးရမှာ လက်တွန့်တဲ့ ဟာဒွေ ဆိုပါတော့ …။
အချုပ်ပြောရရင် အောက်ခြေမှာ အချင်းချင်း … ဖားတာမကောင်းဝူးဟေ့…
မဖားကြစို့ဟေ့ … ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကြေပြွန်စို့ဟေ့ ကြွေးကျော်ယုံနဲ့တော့
မလုံလောက်ဘူး ယူဆပါတယ်။ ၀ယ်လိုအားရှိရင် ရောင်းမယ့်လူ ရှိသလို
အထက်က ဖားတာကြိုက်ရင်တော့ ဖားပေါ်လာမှာပဲပေါ့ဗျာ …
အထက်က လူက တချိန်က သူသည်ပင်လျှင် ဖား ဖြစ်ခဲ့ဖူးရင်တော့လည်း ….ဖားတာ
အနှစ် တထောင်ကျိမ်စာ …
အဗာတာက အာလာဒင်ပုံကြီးနဲ့ ကျိရဆိုးသာ